Trafikana fitaovam-piadiana Olona 4 tratra nivarotra basy tsy fahita eto Madagasikara
Tsy ampy taona ny roa tamin’ireo efadahy izay tratran’ny Zandarimarian’ny Borigadin’Antananarivo Renivohitra teo am-pivarotana fitaovam-piadiana mahery vaika, ny talata 12 febroary farany teo.
Fanafihana sy asa ratsy Mampiasa fiara “plaque rouge” ireo jiolahy
Nohararaotin’ny olon-dratsy ny fampiasana takelaka mena (plaque rouge) misy ireo laharan’ny fiaram-panjakana. Io no vaovao nampitain’ny Talen’ny filaminam-bahoaka eo anivon’ny polisim-pirenena, Contrôleur Général de Police,
Antananarivo Renivohitra Basy 5 sy bala ary fitaovam-piadiana maro no saron'ny Polisy
Nandritra ny telo herinandro izay nahazoana baiko tamin'ny minisitry ny Filaminam-bahoaka mahakasika ny fahitana maso ny Polisy eo anivon'ny tany amamonina ka nahasamborana olona 6,
Asan-jiolahy any Toamasina Saron’ny polisy ireo basy mahery vaika
Manao ny ainy tsy ho zavatra ny polisim-pirenena Toamasina ho fampandriana fahalemana ny tanànan’i Toamasina amin’ny fanafiana mitam-piadiana sy ny fakana an-keriny ary ny vaky trano sy ny sinto-mahery.
Tsy milamina intsony ny tany Mihantsy mpitandro filaminana ny jiolahy
Isan’andro no ahenoana endrika tsy fandriampahalemana, saika amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra.
Ny famotsorana ireo olona ireo no nampitroatra ny mpitatitra ka nahatonga azy ireo hanapa-kevitra ny hitokona anio alarobia. Niantso mpanao gazety omaly talata Atoa Lauret Rajaona Thierry, lehiben’ny fampanoavana (Procureur) ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina ka nanamafy fa nampijalian’ny zandary ireo olona nitora-bato ka noterena nanondro ny atidoha, izany hoe mety niteniteny anarana fotsiny satria natahotra fa tsy tena nilaza ny marina. Naseho ny mpanao gazety tao Toamasina omaly ny mpitora-bato 3 lahy izay efa migadra vonjimaika ao Toamasina ka nitantara ny fampijaliana nataon’ny zandary azy ireo nandritra ny fanadihadiana. Miaro tena ny fitsarana ao Toamasina ary manamafy fa tokony hisy fanadihadiana vaovao atao momba an’ity raharaha fitoraham-bato taksibrosy ao Brickaville ity. Nanao ny asanay izahay, hoy ny lehiben’ny fampanoavana ary tokony hanao tsara ny asan’izy ireo ihany koa ny zandary.